Nezve - BIHUI
Mutsva Mutengi?Dzvanya pano kuti ubhabhatire
Professional Tiling Zvishandiso
Iine kiyi izwi rekushambadzira uye mhando, BIHUI inogadzira maturusi eanogadzira ehunyanzvi uye inovavarira kutarisa dhizaini, kugadzira uye kugovera tiling uye yekuvaka turu uye michina yekubata zvakachengeteka, kutakura uye kucheka kwemahara makuru mataera pamwe nekuisa ese marudzi e zvedongo & porcelain usina kukonekita.
BIHUI ikozvino inodadisa huwandu hweanopfuura zana zvigadzirwa. Tiri kuramba tichivandudza nekuvandudza zvigadzirwa zvedu kune izvo zvinodiwa nemusika kuti tikupe iwe huwandu hwakazara hwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Nekuzvipira kwedu kune hunyanzvi, iwe unozowana zvakawanda zvakawanda uye zvinonakidza zvigadzirwa. Padivi pezvinhu zvedu zvinotengesa zvirinani isu tinokwanisa kuunza mateki matsva, maturusi ekumisikidza, mataira ekuchengetedza mataira kuti uve nechokwadi chekuti iwe unozadzisa zvakakosha zvekuwedzera kwekutengesa kwekutarisira.
Yedu yese renji yakakura yemafomati maturusi zvigadzirwa zvigadzirwa zvine mhinduro, kuchinjana ruzivo uye nehunyanzvi idanho rakakosha mukuvandudza maitiro uye neiyi kudyidzana zvigadzirwa zvinogadzirwa izvo zvinokunda muhunhu uye kunyorera zvichibvumidza kuti mashandiro ave nyore uye zvishoma zvinonetsa.
Kunyangwe kambani yako iri kushanda muEurope kana kuNorth America tinogona kugadzirira nekurodha maodha mukati memazuva manomwe nemwedzi mumwe uchienda kuEurope kana kuNorth America. Saka BIHUI inoita mari yakakosha yemasheya uye zviwanikwa kuti ive nechokwadi chekutsigirwa uye kwevatengi.
Kuchengetwa kwevatengi kwakakosha zvakanyanya kwatiri uye nevashandi vedu vakarovedzwa uye vanokurudzirwa vanoona kuti takanyatsoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu.
Kuburikidza neyekupedzisira makore maviri ari kusimukira, BIHUI yakaremekedza kugadza vamiririri vega, kutanga muUK neSweden nehurongwa hwekuwedzera kugovaniswa kwepasirese nevakabatana navo.
BIHUI yakaisa iyo 126th Canton Fair kusangana nevatengi kutenderera pasirese kubva kumatiles nematombo indasitiri, zvigadzirwa zvakagamuchirwa zvakanaka nezvikumbiro zvakawanda zveKugovera.
Muna Novermber 2019, BIHUI yakaratidza hunyanzvi huwandu hweakakura mafomati maturusi uye zvishongedzo paMitex International Turu Expo muMoscow, Russia. Isu takagamuchira vazhinji vanyoreri uye ikozvino tabvumidza yakasarudzika mumiriri kuti ashandire odha yako chero nguva.
BIHUI ichasangana nevatengi vedu kwese kuEurope kuEISENWARENMESSE Fair 2020 inova inova nguva yedu inokosha.
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Upcoming News
Joinha Redu Rokutumira tsamba
Kana iwe uchida kugamuchira zvigadziriso uye nhau dzekupedzisira dzezvigadzirwa zvedu zvinotanga
Zvishandiso zveNhamba Huru Yemafomu
Kucheka & Kusanganisa Maturu
Vachikuya & makorari
Tile Nhambo Sisitimu
Trowels & Inoyerera
Ruoko Maturusi & zvishongedzo